Beeraha baradhada ee Gobolka Nizhny Novgorod - baradhada
Baradhadu baradhada ee gobolka Nizhny Novgorod
Talaado July 7, 2020
Jun 23, 10:57
Dhulka: 76624 sq. Km
Dadka: 3 202 946 oo dad ah, oo ay ku nool yihiin magaalooyinka - 79,69%.
Booska joqoraafi ahaan: Gobolka Nizhny Novgorod wuxuu xudduud ku leeyahay gobolka Kostroma ee waqooyi-galbeed, gobolka Kirov ee waqooyi-bari, jamhuuriyada Mari El iyo Chuvashia ee bari, Jamhuuriyadda Mordovia ee koonfurta, gobolka Ryazan ee koonfur-galbeed, iyo Vladimir iyo gobollada Ivanovo.
Cimilada cimilo qabow, qabow, jiilaal dheer iyo xagaa kulul.
Relief: Gobolku wuxuu ku yaal qaybta dhexe ee Badda Bariga Yurub. Dhulku wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo isku mid ah: kaymaha hoose-Trans-Volga iyo geed-hoosaadka geed-prega Volga.
Ciid: sod-podzolic iyo carrada podzolic ayaa adkaaday (66% dhulka); kaymaha cawlan waxay haystaan ​​16,3%; chernozemic 7,9%; daadad heersare ah 3,6%; ciida iyo peat 6,2%.
Aagga dhulka Beeraha: 2,7 milyan oo hektar
Gobolka Nizhny Novgorod ayaa dhaqan ahaan ka mid ah tobanka (iyo ka badan, shanta ugu sarreysa) ee gobollada ruushka-hoggamiyaha wax soo saarka baradhada. Waxaan horeyba u qornay wax ku saabsan guulaha ay ka gaareen aaggan 2016, laakiin sanadihii la soo dhaafay, Nijy Novgorod beeraleyda kuwa wax beerta ayaa helay natiijooyin cusub oo la arki karo.
Sanadka 2019, ururada beeraha iyo beeraha ee gobolka waxay u qoondeeyeen baradhada 14,7 kun oo hektar. Dhamaadka xilliga, qiyaastii 500 kun oo tan oo baradho ah ayaa la goostay (marka laga reebo shirqoolada guryaha gaarka loo leeyahay), oo 11% ka sarreeya heerka 2018. Gobolka Nizhny Novgorod wuxuu galay kaalinta seddexaad marka loo eego dalagyada karsan ee barandhada Ruushka.
Soosaar baradho abuur
Gobolka Nizhny Novgorod, toddobo beero waxay soo saaraan miraha dhalmada baradhada sare leh. Baradhada microclonal ee faafinta waxaa fuliya LLC Latkin (degmada Arzamassky), LLC Elitkhoz (degmada Borsky), LLC Axentis (degmada Gorodetsky), iyo sidoo kale laan ka tirsan FSBI Rosselkhoztsentr ee gobolka Nizhny Novgorod. Shirkad kastaa waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta aaggan gobolka.
Sidaa darteed, sanadka 2020, laan ka mid ah FSBI Rosselkhoztsentr oo ka tirsan Gobolka Nizhny Novgorod waxay hirgalisay mashruuc loogu talagalay kobcinta minjoorrada baradhada ee lagu koriyo guryaha kuleylka ah sanadka 20: waxay u xilsaaray in lagu koriyo dhir cagaaran oo lagu beero geedo yar-yar, oo ay ku qalabeysan yihiin qalab gaar ah oo loogu talagalay dayactirka saacadda iyo heerkulka ugu wanaagsan iyo huurka, taas oo suurta gal ka dhigaysa in la qabto shaqo ma aha oo keliya xilliga diiran, laakiin sidoo kale heerkulka qaboojinta. Dhamaadkii Maarso, ilaa 000 oo dhir ayaa lagu beeray laba guri oo lagu koriyo.
Sidoo kale sanadkan, Nizhny Novgorod Rosselkhoztsentr waxay si guul leh ku bilaabatay wax soo saarka hal-abuurka leh ee baradhada baradho ee vitro iyadoo lagu saleynayo waaxda degmada Bolshemurashkinsky.
Dhismaha dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo oo loogu talagalay wax soo saarka minicubers of baradho ee degmada Gorodetsky (LLC "Akentis") waa socdaa, waa mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee maal gashiga beeraha ee gobolkayaga.
Guud ahaan, qadar weyn oo baradho abuur tayo sare leh ayaa laga soo saaray gobolka, kaas oo u oggolaanaya qancinta baahiyaha soosaarayaasha beeraha maxalliga ah iyo keenista alaabada ka baxsan gobolka.
Noocyada noocyada baradho ee ugu caansan gobolka waa Gala, Cas Scarlett, Colomba, Vineta, Breeze, Innovator.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu hubinayo soo-saarista bacrinta carrada waa waraabinta iyo dib-u-soo-noqoshada dheecaanka.
Gobolku wuxuu soo saaray barnaamij dowladeed "Horumarinta agro-warshadaha isku-xirka ee Nizhny Novgorod Gobolka", oo lagu ansaxiyay Go'aanka Dowladda Nizhny Novgorod ee Gobolka taariikhdu markay tahay Abriil 28, 2014 No. 280, oo ay kujirto Qayb-hoosaadka "Horumarinta Dhul-beereedka Dhul-beereedka Dhulka Gobolka Nizhny Novgorod" illaa 2020.
Intii lagu jiray barnaamijka (laga soo bilaabo 2016 illaa 2019), 7167,7 hektar oo dhul beereed ah oo la waraabiyay ayaa laga hirgaliyay gobolka (sababtuna tahay dhismaha cusub iyo dib-u-dhiska nidaamyada dib-u-soo-noqoshada).
Sanadkii 2019, iyadoo ay heshiis la galeen Wasaaradda Beeraha ee Ruushka ee Gobolka Nizhny Novgorod, waxaa lagama maarmaan noqotay in la sameeyo 1755,4 hektar oo dhul ah oo dib loo soo celiyay, laakiin qorshaha ayaa la hirgaliyay 101%: qalabka waraabinta waxaa lagu rakibay 1779,02 hektar. Mashaariic waraab ayaa laga bilaabay Arzamas, Shatkovsky, Sergach, Vorotynsky iyo Sharang degmooyinka.
Loogu talagalay hirgelinta barnaamijka sannadka 2019, 25 923,2 kun oo rubles ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda federaalka, iyo 79 949 kun oo rubles miisaaniyadda gobolka.
Sanadka 2020, gobolku wuxuu ku dhaqaaqi doonaa dib u qiimayn dhul dhan 1641 hektar.
Asal ahaan, qalabka waraabka ee gobolka waxaa loo isticmaalaa waraabinta baradhada (ee degmooyinka Arzamassky, Shatkovsky iyo Gorodetsky), khudradda (degmooyinka Shatkovsky, Krasnobakovsky), jardiinooyinka (ee ku yaal Sergachsky, Vorotynsky iyo Sharangsky).
Dib ula soo noqoshada dhulku waxay si weyn u kordhineysaa heerka adeegsiga ee Bacriminta macdanta. Wax soo saarka baradho ee waraabka ayaa ka kordhay 257 kg / ha (celceliska natiijada gobolka) ilaa 500 kg / ha, karootada - ilaa 583 kg / ha. Sidaas darteed, qiimaha wax soo saarka ayaa sidoo kale la dhimay.
Gobolku wuxuu wajahayaa howsha sii horumaarinta dhul bixinta. Tani waa hab la hubo oo lagu kordhiyo mugga wax soo saarka nooc kasta oo dalag ah.
Soosaarayaasha Beeraha Nizhny Novgorod waxay u dhoofiyaan baradhada jamhuuriyada Moldova.
Sanadka 2019, in ka badan 5 kun oo tan oo baradho bakhaar ah oo qiimahoodu gaarayo 50 milyan oo rubles ayaa loo diray dalkan. Dhoofiyeyaasha ugu waa waa Agrofirm Rus, TNV Mir Yashchenko iyo Shirkadda, Belorechye CJSC, Beeraha Vetluga Beeraha.
Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Nizhny Novgorod waxay taageero siisaa shirkadaha beeraha ee gobolka abaabulka howlaha dhoofinta waxayna rajeyneysaa in jihadaasi ay horumarin doonto: mugga sahayda ayaa kori doona, juquraafiguna wuu fidin doonaa.
Karsanaanta baradhada ayaa ah warshado rajo leh oo loogu talagalay gobolka Nizhny Novgorod, marka la eego mugga wax soo saarka. Nasiib darrose, xilligan waxaa jira dhowr shirkadood oo ku takhasustay wax soo saarka baradho ee gobolka: soosaarka istaarijka baradhada (Syryatinsky Starch Plant) ayaa la bilaabay, waxaa jira aqoon isweydaarsiyo loogu talagalay soo saarida baradhada nadiifinta qashinka (LLC Latkin, LLC Echo iyo kale). Waxaan rajeyneynaa in maalgashadeyaasha mustaqbalka ay qaddarin doonaan kartida gobolka, iyo liistadani si weyn ayey u ballaaran doontaa.
Waxyaabaha ay diyaariyeen adeegga saxaafadda wasaaradaha beeraha iyo ilaha cuntada ee gobolka Nizhny Novgorod
Tags: 2020 .2Soosaarka baradhadadib u soo celinGobolka Nizhny Novgorodbaradhada abuur